ALEFASO NA ALAO NY CLICKLOCK MOUSE AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Alefaso na alao ny ClickLock Mouse amin'ny Windows 10
Alefaso na alao ny ClickLock ny totozy amin'ny Windows 10: Rehefa alefa ny ClickLock dia tsy mila misintona rakitra na fampirimana mitazona ny bokotra totozy isika, amin'ny teny hafa, raha te-hisintona rakitra na lahatahiry avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa isika dia tsindrio fohifohy ny rakitra mba hanidiana ny entana voafantina dia avy eo indray kitiho raha te hamoaka ilay rakitra. Tsy hisintona sy hilatsaka rakitra intsony avy eo amin'ny toerana hafa. Raha manana olana ianao amin'ny fitazonana ny bokotra totozy ary mitaritarika ny bokotra dia azonao atao tsara ny mamela ny ClickLock.
Fampiasana kapila 100 aorian'ny fanavaozana ny windows 10
Azonao atao ihany koa ny manova ny fikirana ho an'ny ClickLock amin'ny fotoana mety ilazanao mihazona ny bokotra totozy alohan'ny hidiranao ny entanao izay manome anao fifehezana bebe kokoa amin'ity fampiasa ity. Na izany na tsy mandany fotoana kely aza dia andao jerena ny fomba ahafahana manafatra na hanafoana ny ClickLock ny totozy amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny fanampian'ny tutorial eto ambany.
Fomba 1: Alefaso na alao ny ClickLock ny totozy ao amin'ny fikirana Windows 10
Fomba 2: Manova ny toe-javatra Click Click Mouse amin'ny fananana totozy
1. Kitiho ny Windows Key + I hanokatra ny setting avy eo tsindrio Fitaovana.
2. Avy amin'ny menio ankavanan'ny tanana dia tsindrio Totozy.
3. Ankehitriny, eo am-baravarankely an-kavanana ankavanan'ny hidina mankany amin'ny setting mifandraika dia tsindrio eo Safidy totozy fanampiny .
4.Ataovy azo antoka ny mifamadika amin'ny kiheba Buttons dia eo ambaniny Tsindrio ClickLock Hiverina ny ClickLock raha te Enable ClickLock ianao.
chrome tsy mandeha aorian'ny fanavaozana ny windows
5. Toy izany koa, raha tianao alefaso ny ClickLock esory fotsiny Alefaso ny ClickLock.
1.Averina indray tsindrio Safidy totozy fanampiny eo ambanin'ny Mouse Settings.
rafitra ntoskrnl.exe sy fampiasana kapila fitadidiana voafintina
2.Mifindra amin'ny Buttons kiheba tsindrio avy eo toerana s ambanin'ny ClickLock.
3. Ankehitriny, alamino ny slider arakaraka ny hafiriany na ny halavanao tehirizo ny bokotra totozy alohan'ny hidinan'ny entana voafantina ary tsindrio OK.
Fanamarihana: Ny fotoana default dia 1200 milliseconds ary ny vanim-potoana dia avy amin'ny 200-2200 milliseconds.
fijanonana kaody mpamily_irql_not_less_or_equal windows 10
4.Click Ampiharo arahin'i OK.
5. Atsangano indray ny solosainao mba hamonjy fanovana.
Izay no izy, nianatra tamim-pahombiazana ianao Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny mouse ClickLock amin'ny Windows 10 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity lesona ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra misy ny hevitra.
vonoy ny fanavaozana ny fiara Windows 10 an-trano
mandresy 10 miraikitra amin'ny efijery fandraisana
OK google raha tsy eo ny efijery
Tsy afaka tonga amin'ity pejy ity ny sisiny
Windows 10 misintona mikatona amin'ny 99%